Wararka - Qeexitaanka isticmaalka tuubada
Kaydinta tuubada caaga ah
Qolka keydku waa inuu ahaadaa mid qabow, hawo leh oo qallalan. Heerkulka heerkulka sare ee ka sarreeya + 45 ° C oo aan lahayn hawo hawo ah waxay sababi kartaa isbeddel joogto ah ee tuubada caagga ah. Fadlan la soco in xitaa cirifka tuubada la baakadeeyay, heerkulkan lagu gaari karo qorraxda tooska ah. Dhererka isdabajooga joogtada ahi waa inuu ahaadaa mid ku habboon alaabada u dhiganta iyo heerkulka deegaanka. Miisaanka rarka ee tuubada tuubada ayaa kuleyl badan xagaaga waana laga yaabaa inuu xumaado. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in aysan jirin wax xiisad ah oo ku jirta tuubbada sidaas darteedna aan la abuurin walaac, cadaadis ama culeys kale, maadaama xiisaddu ay kor u qaadeyso isbeddel joogto ah iyo dildilaac. Kaydinta bannaanka, tuubada balaastigga ah waa inaan loo dhigin qorraxda tooska ah. Xirmada ma xirnaan doonto guntinta tuubbada. Waxay kuxirantahay sheyga, tuubada balaastigga waa in laga ilaaliyaa ultraviolet joogto ah iyo shucaaca ozone.
Gaadiidka tuubada balaastigga ah
Dhaqdhaqaaqa joogtada ah awgood, culeyska tuubada balaastigga ah ayaa aad uga weyn tan soo baxday inta lagu guda jiro keydinta. Xilliga xagaaga, heerkulka sare ee banaanka, kuleylka kuleylka gawaarida iyo gariirka joogtada ah inta lagu jiro wadista waxay si deg deg ah u horseedi kartaa isbeddel joogto ah ee tuubada. Sidaa darteed, heerkulka sare, dhererka xargaha inta lagu jiro wareejinta waa inuu ka hooseeyaa dhererka inta lagu jiro keydinta. Inta lagu guda jiro gaadiidka, tuubada balaastigga ah lama tuuri doono, laguma jiidan doono sagxadda dhulka, lama jajabin doono ama lama tillaabsan doono. Tani waxay dhaawac u geysan kartaa lakabka kore, Helixkuna wuu is beddeli karaa ama xitaa wuu gebi ahaanba jabi karaa. Wax masuuliyad ah iskama saarin. Sidaa darteed waa in taxaddar la muujiyo si loo hubiyo in maaraynta aan habbooneyn aysan waxyeello u geysan.
Habdhaqanka heerkulka tuubbada caagga ah
Si ka duwan tuubada caagga ah, qabowga iyo kuleylka ayaa saameyn weyn ku leh tuubada balaastigga ah. Tuubbada caaga ah waxay bedeshaa dabacsanaanta heerkulka dhexdhexaad ama heerkulkiisu hooseeyo ama sare. Heerkulka hoose, way sii adkaanayaan illaa ay noqdaan kuwo jilicsan. Xaaladda dheecaanka balaastigga ah waxaa lagu heli karaa iyada oo la marayo heerkul sarreeya oo u dhow barta gaarka ah ee dhalaalida caagga ah ee caagga ah. Astaamahan awgood, cadaadiska iyo sifooyinka faaruqinta ee tuubada balaastigga ah waxay kaliya la xiriiraan heerkulka dhexdhexaadka iyo deegaanka qiyaastii + 20 ° C. Haddii heerkulku ka leexdo dhexdhexaadka ama bay'ada, dammaanad kama qaadi karno u hoggaansamida tilmaamaha astaamaha farsamada.
Saamaynta iftiinka qoraxda ee tubbada PVC
Shucaaca Ultraviolet ee ka yimaada qorraxda wuxuu weeraraa dhuumaha PVC wuuna baabi'iyaa waqti ka dib. Tani waxay la xiriirtaa mudada iyo xoojinta shucaaca qoraxda, taas oo inta badan ka yar waqooyiga Yurub marka loo eego koonfurta Yurub. Sidaa darteed, waqtiga saxda ah lama bixin karo. Adoo ku daraya xasiliyaha gaarka ah ee UV, jajabka tuubada balaastiigga ah ee shucaaca UV waa la gaabin karaa, laakiin gabi ahaanba lama joojin karo. Xasiliyayaashani sidoo kale waxay bixiyaan shucaac ultraviolet joogto ah. Qaar ka mid ah noocyada tuubbadayadu waxay ku rakiban yihiin xasiliyayaashan 'UV' sida caadiga ah si loo hubiyo nolosha muddada dheer ee qorraxda tooska ah. Marka la codsado, nooc kasta oo tuubbo ah ayaa lagu dhejin karaa xasiliyayaasha UV xaaladaha gaarka ah.
Cadaadiska iyo dhaqanka faaruqinta tuubada
Tuubada cadaadiska ee caadiga ahi waa nooc kasta, oo leh maro sida cadaadis side. Dhammaan noocyada tuubbada leh balaastiigga ama biraha birta ah waa faakiyuumka faakiyuumka. Dhammaan tuubbooyinka waa la beddeli karaa dherer iyo dhexroor waana la qalloocin karaa xitaa marka lagu jiro cadaadis cayiman iyo qiimayaal faaruq ah. Xitaa iyada oo lagu jiro xaaladaha shaybaarka, dhererka iyo wareegga tuubbada oo leh maro maaddaama qaybta qaybta cadaadisku ay caadi tahay. Sidaa darteed, dhammaan xaaladaha hawlgalka ee ka leexanaya qeexitaanka waxay saameyn weyn ku leeyihiin habdhaqanka alaabtan. Dhammaan tuubbooyinka leh jiingado laakiin aan lahayn xoojin dhar caag ah ayaa ku habboon oo keliya tuubbada cadaadiska aad u xaddidan, laakiin badanaa waxaa loo isticmaalaa codsiyada faakiyuumka. Marka loo eego naqshadeynta, dhererka noocyadan tuubbada marwalba way is beddeli karaan inta lagu jiro isticmaalka, illaa 30% dhererka, xitaa gudaha cadaadiska la cayimay iyo qiimayaasha faaruqinta. Isticmaaluhu waa inuu tixgeliyaa dhammaan dhererka suurtagalka ah iyo kala duwanaanta wareega iyo wareegga foorarsiga tuubada inta lagu jiro isticmaalka. Xaaladaha adeegga awgood, tuubada waa in aan loo dhigin wax u dhimaya sida dhuumaha oo kale, laakiin waa inay awood u leedahay inay si xor ah u socoto wakhti kasta. Ciida dhexdeeda, tuubada waxaa la dhigi karaa oo kaliya marin biyoodka cabirkiisu ku filan yahay. Nidaamkan, dhammaan kala duwanaanshaha suurtagalka ah ee joomatari tuubada waa in sidoo kale la tixgeliyaa. Waxaan si adag kugula talineynaa inaad go'aamiso dabeecada tuubada loo isticmaalo baaritaanka hore ka dibna rakib. Marka tuubada muquuninta la isticmaalo, dheereynta iyo qallooca hoos u dhaca cadaadiska waxay sababi doontaa hoos u dhaca dhexroorka gudaha isla waqtigaas. Tuubbada leh birta birta, furku ma wada raaci karo hoos u dhaca dhexroorka gudaha. Natiijo ahaan, furku wuxuu u mari karaa gidaarka tuubada bannaanka wuuna burburin karaa tuubbada. Sababtoo ah isticmaalka joogtada ah ee culeyska xad-dhaafka ah, waxaan inta badan kugula talineynaa inaad u isticmaasho dhar sida tuubbada xambaara cadaadiska dhabta ah. Tani waxay ka hortagtaa dheereynta xad dhaafka ah.
Iyada oo ku saleysan DIN EN ISO 1402. - 7.3, cadaadiska qarxa ee hawo la tuujiyey iyo tuubbada sambabada ayaa lagu go'aamiyaa qiyaastii 20 ° C, biyahana waxaa loo isticmaalaa dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
Isticmaal tuubbo tuubbo
Codsiyada nuugista, tuubbada caagga ah ee caagga ah ayaa lagu dhex dari karaa noocyo kala duwan oo ganacsi laga heli karo. Codsiga, tuubada ayaa si adag loogu jiiday isku-xidhka oo la xidhay. Codsiyada cadaadiska, tuubada wareegga ayaa aad u dhib badan waxayna u baahan tahay dabool joogto ah sababo la xiriira kala duwanaansho iyo kala-dhexaad. Qalabka kooxdayada wax soo saarka 989 waxaa loogu talagalay nooc gaar ah oo tuubbo ah waxayna aad ugu habboon yihiin tan. Markaad isticmaaleyso qalabka caadiga ah, fadlan weydiiso talooyinka habraacayaga khuseeya. Isticmaal tuubada dharka PVC si aad u hubiso in adkaanta jeexnaanta walxaha ay aad uga yar tahay tan caagga ah. Natiijo ahaan, isku dhejinta ayaa laga yaabaa inaysan laheyn wax gees ah oo fiiqan oo ay jeexjeexdo marka la isku soo uruurinayo lakabka gudaha. Haddii tuubbada caagga ah ee caag ah ay ku xiran tahay tuubbada tuubbada cadaadiska wax ku xirta ama haynta tuubbada, hubi in cadaadiska lagu dabaqay xoogga ugu yar ee suurtogalka ah. Haddii kale, lakabka tuubada ayaa lagu xoqin karaa dharka mashiinka isku xiraha ama tuubada tuubada